Imveliso yanamhlanje, esebenzela ubukhulu bayo ubuhle, inika ukhetho oluninzi lweendlela ezahlukeneyo zokunakekelwa kwesikhumba entanyeni nakubuso. Le mousse, kunye ne-tonics, kunye ne-gels, kunye ne-creams, kunye nokuhlanjululwa okuhlukeneyo kunye ne-tonic liquids, kunye nezinye iindlela. Kodwa a madoda kufuneka akhumbule ukuba kuphela ukufumana iindlela akwanele, sisadingeka sazi ukuba sisisebenzisa kakuhle. Kuya kumangalisa ukucinga ukuba ukunyamekela isikhumba esilukhuniyo kuya kukwanela ukucoca ukhilimu ovela kwibhubhu uze udibanise esikhumbeni. Iimveliso ezihamba ngokukhawuleza okanye ezingcono okanye ezinye iimveliso zithathwa xa ziqhutyelwa esikhwameni ngeminwe yeminwe. Kukho ezinye izinto ezinobunzima xa usebenzisa iimveliso zonyango. Ukuba uwalandela, ulusu lwakho luya kuhlala lulungele kwaye luhle. Iinkcukacha ezingakumbi malunga nokusebenzisa ukhilimu womntu kunye nezinye iimveliso ngokuchanekileyo, siza kuthetha kwinqaku la namhlanje.
Ngokuqhelekileyo amabhinqa ayazibuza ukuba ingaba imali eyisebenzisayo ukwenzela ukuba ukunakekelwa kuphumelele. Nantsi kukho umgaqo owodwa omele uwakhunjulwe: inani lemali elisetyenzisiweyo kufuneka lilingane nomthamo wepea elula.
Kwaye ukuze ungaphambuki ngobukhulu, thabatha uphinde ujikeleze iminwe nge-pea eqhelekileyo, kwaye ngokuqinisekileyo uya kukhumbuza le vidiyo. Sithatha ikhambi elifanelekileyo, silibeke entendeni enye, kwaye ngeminwe yesinye icala sisebenzisa ikhambi kwesikhumba. Sisasabalalisa ngokulinganayo, ukususela kwindawo ebunzini, ngoko siyisebenzisa kwizihlathini kunye nesikhumba se-chin. Emva koko usasaze i-arhente ngokunyakaza okukhanya kummandla weetempile. Ngoko sebenzisa, ngokukodwa, iimveliso ezikhuselekileyo kunye neekram zokwenza umhla.
Lo mgaqo kufuneka ulandelwe xa usebenzisa ubunzima kwiindlela ezihambelanayo kunye neoli, enesakhiwo esinzima. Sithatha ukhilimu (ubungakanani - nge-pea), uyifake entendeni enye, kwaye ngeminwe yesinye isandla siyicubungula, siyixube. Ngaphantsi kwefuthe leminwe yakho, loo mveliso iya kuba yiplastiki enkulu, kulula ukuyisebenzisa, i-viscosity yayo iya kuncipha. Esi sixhobo siya kuba lula ukuyisebenzisa, kwaye kulula ukuyifumana.
Umgaqo wesithathu kufuneka ulandelwe xa usebenzisa amafutha okuzongcola, utyando olunzima, ngokuqhelekileyo olwenziwa ngeJapan. Siqokelela umkhiqizo entendeni yesandla sasekhohlo, cinezela ngesandla sokunene uze usasaze isiza phakathi kwezandla, ngokulinganayo njengoko kunokwenzeka, uze ucinezele iintendelezo ngeendlela ezibhekiselele kuzo, njengokungathi uzama ukunyusa kwioli yeloyile okanye kwi-lotion. Kubalulekile ukwenza uhambo oluninzi olufanayo, ukwenzela ukuba zonke izixazululo zisesikhumbeni sobuso. Ngokuqhelekileyo kwimigaqo yezilumkiso ubhale iingcebiso ukuba loo mveliso ayifuni ukuyihlamba kwesikhumba okanye ukuyihlamba. Ukulawulwa kweendleko kulungile ngokufanelekileyo kwiindlela ezinjalo.
Ngale ndlela, ungasebenzisa ukhilimu, i-tonic kunye neminye imikhiqizo. Ukuqhuba i-drive kuthetha ukuba kuyimfuneko kuphela, okokuqala kususwe isikhumba. Indlela encinane ethululelwe entendeni yesandla sasekhohlo, kwaye iminwe yesandla sokunene ithatha imali encinci kwaye iyifake ngokukhawuleza kwesikhumba. Ukuba isikhumba sakho asilolo hlobo oluthathaka, ngoko ke ukunyakaza ukuqhubela umkhiqizo kwesikhumba kunokwenziwa ngakumbi, kunokuba kukhankanywe. Ngaloo ndlela, ukuhamba kwegazi kwiifom zendawo ephezulu yesikhumba kuya kuqiniswa, oku kuya kubakho ukuphucula ukutsalwa kwayo.
Zonke ezi ndlela zinokuxhaswa nge-massage esebenzayo. Ungasebenzisa amafutha anamnandi. Ngokomzekelo, uyayisebenzisa ngokuncedisa ukukhutshwa kwesohlwayo kwaye ngokukhawuleza uzalise inkqubo ngenkqubo yokusila. Ukunyakaza okusetyenziselwa ukusilalisa kuya kunceda ukufumana ngokubhetele ngakumbi kunye nantoni na. Ukuhlawula kufuneka kwenziwe ngokukhawuleza ngezandla zombini. Ukunyakaza ngexesha lokuxilisa kufuneka kuqhutywe phakathi kombuso ukuya kumacala: kwiitempile kunye neendlebe. Iseshoni yokusilalisa ingagqitywa xa ulusu lukhupha ngokupheleleyo.
Umgaqo "amanqaku ama-5".
Le ndlela isetyenzisiwe ixesha elide, kodwa kude kube ngoku ayizange ilahlekelwe yimpumelelo yayo. Iingcali ezininzi zincoma ukuba zisebenzise kulo mgaqo xa usebenzisa zonke izimonyo. Ngokwale ngcebiso, kufuneka uthathe imali encinci, ukuze umthamo wayo ungadluli kwisixa se-pea, kwaye ngokusemthethweni uwasasaze kwiindawo ezihlanu eziphambili zobuso. Siqala ngethambo, ngoko kukho iingongoma kwimpumlo, ngoko ezihlathini, ekugqibeleni, ebunzini. Emva kokuba ulwabiwo lweemali kulezi zihloko kufuneka lijongise ubuso bonke.
Le ndlela ifanelekile ekusebenziseni iimaski, kuba lo mgaqo uza kukuvumela ukuba usasaze isixa esilingana nesilwanyana kulo lonke ulusu. Kodwa xa usebenzisa imali, kufuneka ugweme indawo yomlomo kunye namehlo. Ungakulibali ukuba imaski ayifuni ukuba icinezele kwesikhumba okanye ingeniswe kuyo. Zifakelwa kwesikhumba kunye nokunyakaza okulula, njengokungathi udweba ngebhashi. Ukunyakaza okucothayo kunye nokunyamekela okufanelekileyo kukufanelekile kwaye kusasazwa kweemaski.
Ukuba u landela lo mgaqo, akudingeki urekhode ixesha kwaye uyigcine kakuhle. Nangona kunjalo, ungakulibali ukuba kwiindlela ezahlukeneyo zasehlobo, kubandakanya ukhilimu, kunokusetyenziswa ngaphambi kokushiya ekhaya, kodwa ebusika kufuneka kube ncinane emva kokufaka imali kwesikhumba phambi kokuba ungene ngaphandle komda wendlu. Ixesha kufuneka lidlule kwaye emva kokusetyenziswa kweemali zantambama kuze kufike ixesha lokulala. Esi sithuba kufuneka sibe malunga neeyure ezimbini. Xa eli xesha lidlulayo, kufuneka ususe ama-remnants of remedy kunye ne-napkin, kuba i-cosmetologists ayincomo ukugcina ubisi busiki ubuso ebusweni ubusuku bonke. Xa silala, yonke imfucuza esuka kwikhilimu iyahamba, kwaye i-cream ikwenza ifilimu engabonakaliyo, engakhokelela ekubeni i-vasodilation, i-reddening yolusu, i-peeling. Isiphumo kusasa singabi sisifo esitsha somntu ophumlekileyo, kodwa isiskiti esikhatheleyo kunye nesikhumba esingenampilo.
Kufuneka ukhunjulwe ukuba izondlo ezitholakalayo kwii-creams ziqala ukusebenza emva kweyure nesiqingatha emva kokuba sisebenzise le mveliso, ngoko kufuneka sisuse ubuninzi balo ukuze ulusu lwethu luphefumle ngokukhululekile.
Ukuba uyayilandela yonke le mithetho elula kodwa esebenzayo, unako ukufumana ezininzi kwiindlela zokunyamekela isikhumba sakho, kwaye ngokuqinisekileyo umphumo uya kukukholisa kwaye ubangele abanye.
Ukucoca ubuso buso emzimbeni
Iimfihlelo zendalo: iMask's masks
U-Ksenia Borodina wanika umyeni wakhe ithoyizi ebiza, ifoto
Ukunyamekela izandla, izilwanyana zomntu
Iinqwelo kunye neepalm
Iifama zokulahlekelwa kwesisindo
Ukuvula i-shishini lakho: indlela yokugqiba ngayo?
Ihlobo kufuneka libe naloo onke amabhinqa efashini: i-hook crechet yabasetyhini abavulekileyo
Kuphi kungcono ukusebenza - kwinkampani enkulu okanye inkampani encinane?
Indlela yokuchonga ixesha lokukhulelwa kwexesha lokukhulelwa?